बुढानीलकण्ठमा सप्ताह : लाग्ला त देउवालाई व्यास र गणेशको आशीर्वाद?
9th July 2019 | २४ असार २०७६
'धनवान भए भने उर्लिएको वेग
देखिएको फेरि छैन वर्षकालको मेघ'
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा मंगलवार दिउँसो गुञ्जिएको भजनको एउटा अंश हो यो।
'धन र पदको लोभले हिँड्नु हुँदैन, हे मनुष्य! हिउँदमा सुकेको गंगा वर्षाकालमा गड्गडाएर आउँदा मान्छे भन्दैन। पशु भन्दैन। गुट्मुटाएर लान्छ। बाढी पहिरो जान्छ। शरीर बुढो हुँदै जान्छ। यो शरीर भनेको रोगको घर हो,' भजनबारे प्रष्टाउँदै थिइन् भजन मण्डलीकी एक सदस्य।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आँगनमा गुञ्जिएको यो भजन र त्यसको व्याख्याले पछिल्लो निर्वाचनमा भोगेको परिणामलाई सम्झाइरहेजस्तो लाग्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवा निवासमा अघिल्लो साताको बिहीवारबाट श्रीमद्भागवत सप्ताह पुराण चलिरहेको छ। देउवाले पिता प्रसादसिंह देउवाको सम्झनामा सप्ताह लगाएका हुन्। प्रसादसिंहको २०६८ चैत ३ गते ९८ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो।
मंगलवार मध्यान्हमा देउवा निवास पुग्दा अनुष्ठान विश्राममा थियो। सिमसिम पानी पर्न शुरु भइसकेको थियो। दिउँसो सवा एकबाट अनुष्ठान सुचारु भयो। अनुष्ठानमा भजन बजिरहेको थियो अनि व्याख्या पनि। त्यही भजनको व्याख्यामा भनेजस्तै पछिल्लो निर्वाचनमा बर्खाको भेल झैं आएर ने क पाले कांग्रेसलाई गुट्मुट्याएर बगाएको थियो।
सप्ताहको उत्तरार्धतिरको दिन त्यसमाथि पानी अनि मध्य दिउँसो, निम्तालुको आउजाउ पातालो थियो। मंगलवार नै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, नेता मिनेन्द्र रिजाल पनि पुगेका थिए प्रसाद ग्रहणका लागि। सप्ताहको साङ्गे भोलि बुधबार हुँदैछ।
सप्ताह वाचन गर्ने सिंहासनको एकछेउमा बसेकी भजन टोलीकी एक सदस्यले पदको लोभ र धनको घमण्ड गर्न नहुने विषयबाट भजन शुरु गरिन्। भक्तालुहरु भजनमा ताली बजाउँदै, नाच्दै मग्न थिए। देउवा पत्नी आरजु बेलाबेला निम्तालुसँग फोटो खिच्न मञ्च नजिक आइपुग्थिन्। बाँकी समय बत्ती कात्नमा उनी व्यस्त देखिन्थिन्। सभापति देउवा भने बाहिर देखिएनन्। मध्यान्हमा मात्र उनी बाहिर देखिए।
यता अनुष्ठान शुरु भइसकेको थियो। मञ्चबाट भजन टोलीकी महिलाले विभिन्न प्रसंग र कथा सुनाइरहिन्।
यही सिलसिलामा उनले आफूलाई बिहानै एक शुभचिन्तकले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनोस् भनी शुभकामना दिन अनुरोध गरेको सुनाइन्।
'आज बिहान मलाई एउटा फोन आयो। भन्न हुने हो कि नहुने हो। गुरुहरुलाई भनिदिनुहोला, यो आशीर्वाद दिनुहोला भन्नुभयो,' उनले माइकबाट ती शुभचिन्तकले भनेको कुरा सुनाउन थालिन्, 'घर चलाउन त कति गाह्रो हुन्छ। यहाँ त घर चलाउने प्रमुख पनि उहाँ नै, देश चलाउने पनि उहाँ नै। कति गाह्रो हुन्छ। ईश्वरको कृपाले यो निवासको प्रमुख व्यक्तित्व हामी फेरि प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छौं। यो कुरा भन्न नहुने त होइन होला। यो पक्का कुरा हो, भगवानको कृपा भयो भने असम्भव भन्ने केही हुन्न।'
पछिल्लो निर्वाचनअघि देउवाले आफूलाई ज्योतिषले सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेको भन्दै भाषण नै गरेका थिए। देउवाले चुनावी सभाका लागि धनगढी पुग्दा भनेका थिए, 'ज्योतिषीले मलाई ७ पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेका छन्, चुनावपछि पनि म नै प्रधामन्त्री बन्ने हो।'
निर्वाचनपछि त देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् नै, उनको पार्टी कांग्रेसले नै नराम्रो हार बेहोर्‍यो। अहिलेको अवस्थामा त देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छाँट देखिदैन। तर, सप्ताह मण्डपभित्रबाटै ती महिलाले भनेजस्तै पुराणले बनाउला त देउवालाई प्रधानमन्त्री?
उसो त पहिलोपटक २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। ज्योतिषीकै भविष्यवाणीलाई मान्दा उनको अझै ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग बाँकी नै छ। अनि सप्ताह पुराणमा आउने भक्तालु र व्यासासनमा बसेका व्यास र गणेशको आशिर्वादले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ कि सभापतिबाटै हटाउँछ भन्ने चाहिँ पछि नै थाहा होला।